Manuel Neuer oo ka jawaab celiyay eedeymaha halyayga reer Germany ee Lothar Matthäus – Gool FM
Manuel Neuer oo ka jawaab celiyay eedeymaha halyayga reer Germany ee Lothar Matthäus
(Germany) 15 Okt 2018. Goolhayaha xulka qaranka Germany Manuel Neuer ayaa xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu ka qeyb qaato kulanka ay France ku wada ciyaari doonaan UEFA Nations League.
Kadib guuldaradii xulka Germany kasoo gaartay dhigooda Holand, goolhaaye Manuel Neuer ayaa la kulmay dhaleeceena kala duwan, iyadoo shaqsiyaadka qaar ay dalbanayaan in booskiisa lagu badalo dhigiisa kooxda Barcelona Ter Stegen.
Manuel Neuer ayaa laga dhaliyay saddex gool kulankii ay Sabtida ku wada ciyaareenn xulka qaranka Holand tartanka UEFA Nations League, laakiin wuxuu sheegay Neuer in uu diyaar u yahay kulanka habeen dambe ay la ciyaari doonaan France.
“Diyaar ayaan u ahay, mana qabo dhibaato jireed”.
“Waxaan dareemayaa inaan sameenayo qaab ciyaareed wanaagsan, laakiin nasiib daro ma aanan ka qeyb qaadan kulamo badan xiliyadii lasoo dhaafay.
Dhamaadka hadaladiisa, Manuel Neuer ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in saaxiibadiis ay wada doonayaan inay lasoo laabtaan 3 dhibcood kulanka France.
Neuer ayaa sidoo kale tilmaamay in dhamaan ciyaartoyda saaxiibadiis ay dib u heli doonaan heerka ugu sareeya ee awoodooda ciyaareed, taasoo dhiiragalin siin doonta kulanka habeen dambe ay kula ciyaari doonaan France tartanka UEFA Nations League.
Guardiola oo magacaabay AFAR kooxood ee ku guuleysan karta xili ciyaareedkan tartanka Champions League
kooxda Real Madrid oo heleysa war aad u wanaagsan kahor kulanka Levante ee horyaalka La Liga